Ungasicoca njani isikrini sakho esiphathwayo | Iindaba zeGajethi
Isixhobo sethu esiphathwayo sele, namhlanje, phantse sisolulo lomzimba wethu. Siyiphatha xa sisiya emsebenzini, ngexesha lethu elisecaleni, ukufundisisa ... Baninzi nabantu abathi, ukuba ubuza ukuba bangaya nantoni na kwisiqithi esiyintlango, ukuba banokukhetha into ibe nye, banokukhetha iselfowuni . Kungenxa yoko le nto, kuba sihamba imini yonke silayishwe yiyo, kufuneka siyikhathalele kangangoko sinakho.
Y Ukunyamekela iselfowuni yethu kubandakanya ukuyenza ngaphandle nangaphakathi. Oko ukubeka i umkhuseli wekhusi okanye ityala phezulu yibuyisele kwaye ufumane olo fluidity olulahlekileyo kudala o khulula indawo ngaphakathi. Kwaye ngokuqinisekileyo ukuba sithetha ngayo ukucoca njani ikhusi mobile yakho Ucinga ukuba ayinayo imfihlakalo ngaphezu kokuyichola kwaye uyisule, kodwa uqinisekile ngayo? Makhe ndikucacisele kwaye uza kubona ukuba ayinangxaki ininzi, kodwa iyenzeka uthotho lweenkcukacha ezincinci kufuneka zithathelwe ingqalelo oko kuyakwenza ukuba ukubonakala kwethu kweselfowuni kube ngathi kutsha.
Ngaphambi kokuqhubeka, kuya kufuneka sikhumbule ukuba akuyomfuneko kuthi ukuba sithenge iimveliso ezithile, ezihlala zibiza kakhulu, ukushiya iselfowuni yethu ingakhange ichukunyiswe. Indlela esiza kuyichaza inokwenziwa ngezinto esinazo ekhaya. Kanjalo, konke oku kusebenza kuyo nayiphi na into ephathekayo okanye ithebhulethi onayo. Nokuba ukhetha luphi ukhetho, kubaluleke kakhulu yenza inkqubo, ubuncinci, isikrini sitshixiwe. Nangona kungcono ukucima isixhobo ngokupheleleyo, ukuba kukucoca ngokukhawuleza akuyomfuneko oko. Sele ulungele? Ziphose kuyo!
1 Khetha imveliso efanelekileyo
2 Ukucoca iiglasi
3 Utywala njengesicoci
Khetha imveliso efanelekileyo
Masiqale ngento elula: xa ucoca iselfowuni yethu kubaluleke kakhulu khetha imveliso elungileyo, Asifuni ukuba ngexesha lokucoca sinokonakalisa i-terminal. Ngaphandle kwethambeka kunye nokukhuselwa kwezikrini, Akukho nzima ukwenza ukukrwela okanye ukukrwela ukuba asicocekanga ngemveliso elungileyo. Akunyanzelekanga ukuba uthenge iimveliso ezibizayo okanye ezinamandla, kuba ngeziseko sinokuba nesiphelo esifanelekileyo.
Iimveliso ezithile zorhwebo zisenokungabi yeyona ndlela ilungileyo yokucoca iselfowuni yethu. Kodwa ukongeza kwimveliso ngokwayo, kuya kufuneka sithathele ingqalelo ukuba sisebenzisa kangakanani. Namhlanje uninzi lweefowuni ezintsha ezithengiswayo zinazo Ukhuseleko lwe-IP, nokuba kukuchasana nothuli okanye ukuntywiliselwa ukuya kuthi ga kwiimitha ezimbini ubunzulu, ke kwezi meko sinokuba nenkululeko engakumbi xa siyicoca. Oku akuthethi ukuba singabeka iselfowuni phantsi kwetephu yesinki ukusukela, nangona sikhuselekile, ayifanelekanga ukuba ibe sesichengeni sokonakalisa into ethile. Ke ngaphandle kokukhuselwa kweselfowuni yakho, khetha imveliso kakuhle kwaye uyisebenzise ngendlela efanelekileyo. Ukuba akunjalo, kuya kufuneka utyelele isifundo sethu sendlela yokufumana kwakhona iselfowuni emanzi. Kwaye siyakuqinisekisa, ngokusuka kumava ethu, ukuba ayisositya sinencasa elungileyo.
Njani? Iiglasi zisula? Ewe uyifunde ngokuchanekileyo. Eyona ndlela inexabiso eliphantsi, elula, elula kunye nekhuselekileyo yokucoca isikrini sakho esiphathwayo ayisiyiyo enye into ngaphandle Sebenzisa iiglasi zokucoca. Nokuba ziyalahlwa okanye zenziwe ngelaphu kwaye zisebenzisa isisombululo sokucoca iglasi, ziya kusinika ukhuseleko lokuba sithambe ngokwaneleyo sukukrwela iglasi, kunye nokusebenza okuyimfuneko ukuze ususe konke ukungcola ungashiyi nomkhondo yena. Kulumkele ukusebenzisa iphepha langasese okanye okufanayo, kwaye ngaphezulu kwako konke, ungaze wome ucocekile isikrini sakho esiphathwayo. Oku kuya konakalisa ukugqitywa kwesikrini kunye nokwenza ukukrala okuncinci.
Ewe, ngale ndlela unokucoca umva weselfowuni ukuba yenziwe ngeglasi. Ukuba unxiba iiglasi, ayizukuba yinto engaqhelekanga ukuba uphathe enye yezi zisuli, iyenza eyona ndlela isebenzayo.
Ewe, sithetha nangokucoca ii-mobiles. Ukuba ufuna isiphelo sendlela yakho esitsha ngaphandle kwebhokisi, isisombululo kukuba sebenzisa utywala ukucoca. Ukucoca iiglasi kunye nokusula okusetyenzisiweyo kwii-chamois zihlala zinotywala njengeyona nto iphambili yokucoca, kodwa sinokusebenzisa idosi encinci ye-ethyl alcohol kunye ne-chamois okanye ilaphu le-microfiber ukushiya iselfowuni yethu ingenakubekwa.
Kubaluleke kakhulu sebenzisa amathontsi ambalwa kuphela, musa ukulahla i-jet kwisixhobo. Icebo elincinci uthele utywala kwi-microfiber okanye kwi-suede emva koko uyigqithise kwiscreen. Ngale ndlela kwaye ukuba ngononophelo olukhulu, nathi sinako kucace izinto ezinje nge Indawo yokubeka iindlebe, njengoko iyindawo apho ukungcola kuhlala kuqokelela khona. Umgangatho olungileyo wotywala, ukongeza kumandla okucoca, yi ukubanakho ukuba ngumphunga ngokukhawuleza, ke idosi esetyenzisiweyo iya kuphuma ngokukhawuleza, sishiya isixhobo sethu sitsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ungasicoca njani isikrini sakho esiphathwayo
Hlala phambi kwe-11.11 yeentengiso ngenxa ye-eBay